कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ वीरगञ्ज, जहाँ आँशुको आहाल बन्न बाँकी (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, २८ साउन । कोरोना भाइरसको संक्रमण यतिवेला तीव्रगतिमा फैलिएको छ । प्रदेश दुई, त्यहाँ पनि वीरगञ्ज त ‘हटस्पट’ नै बनेको छ । दैनिक तीन अंकमा संक्रमित फेला पर्न थालेका छन् ।
भाइरसकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि दैनिक बढ्न थालेको छ । संक्रमित बढ्दै जाँदा अन्य विरामीले उपचारसम्म पनि पाएका छैनन् । अस्पतालहरुले उपचार गर्न नमानेकै कारण मानिसहरु मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म ७ जनाले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाए भने एक बालकले पनि उपचार पाउन नसक्दा ज्यान गुमाउनुप¥यो । के सिंहदरवारलाई विझ्दैन ?
बाराको बारागढी गाउँपालिका २ सुखीपात्राका ९ वर्षीय बालकले उपचार नपाएरै ज्यान गुमाएका छन् । आखिर उनको दोष के थियो रु संक्रमण फैलिंदै जाँदा अस्पतालहरुले उपचार गर्नै मानेका छैनन् ।
उनकै बालकका आफन्तको पीडा हो, यो । ९ वर्षीय बालक सुशील कुमार साहलाई मंगलबार वीरगञ्ज स्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा लगिए पनि अस्पतालले भर्ना गर्नै मानेन । सुशील एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
उनी जस्ता अरु पनि छन् । वीरगञ्ज छपकैयाकी विष्णु लामाले अस्पतालको गोलचक्कर काट्दाकाट्दै प्राण त्यागिन् । शुक्रबार राति स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि आफन्तले एकपछि अर्को अस्पताल पु¥याए, तर न निजी, न सरकारी कुनैले पनि उपचार गरेनन् ।
सुशीलकुमार साह, विष्णु लामाले जसरी नै अस्पताल चाहार्दा चाहार्दै उपचार नपाएर मर्नेको संख्या ७ पुगिसकेको छ । यो संक्रमण रफ्तारमा फैंलिदाको पीडा हो । किन उपचार पाएका छैनन् ? अस्पताल संक्रमितहरुकै अवस्थामा पनि काठमाडौंको सिंहदरवारले बुझेको छैन, वीरगञ्जलाई ।
नत सरकार भएको अनुभुति नै गर्न पाएका छन्, यहाँका बासिन्दाले । साउनको पहिलो साता एकाध कोरोना संक्रमित भेटिएको पर्सा र आसपासको क्षेत्रमा अहिले दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमित फेला पर्ने गरेका छन् ।
अनि कतिले त ज्यान नै गुमाएका छन् । कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २० पुगिसकेको छ । साउनको सुरुमा १ सय ६१ संक्रमित रहेकामा अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा १ हजार नाघिसक्यो ।
तर, पनि काठमाडौं न सुन्छ, न त पीडा नै बुझ्छ ! लक्षण भएका संक्रमितहरु उल्लेख्य बढेका छन् । उनीहरुका लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटरको सुविधा छैन । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पहलमा गण्डक र वीरगञ्ज हेल्थकेयर अस्थायी कोभिड अस्पतालमा १ सय ५७ जनाभन्दा बढी संक्रमित उपचाररत् छन् ।
यी मध्ये ३४ जनाको आइसीयूमा उपचार भइरहेको छ । आइसीयूमा उपचार गर्नेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
वीरगञ्जमा कुन अस्पतालमा कति संक्रमित ?
वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पताल–१५७ जना, आईसीयूमा-३४ जना
त्रीजुद्ध स्कूलकको आइसोलेन–५ जना
कारागार आइसोलेनमा–३८ जना
सिद्धार्थ स्कूलको आइसोलेसनमा–३२ जना
विजय ज्योति होटलको आइसोलेसनमा–९ जना
वीरगञ्ज कलवार धर्मशालमा–५२ जना
पटेर्वा सुुगौली आइसोलेसन सेन्टरमा–५ जना
नारायणी वयोधा अस्पतालमा–१० जना
रानीपोखरी होटलमा–३४ जना
रानीसती धर्मशालामा–४१ जना
आइसोलेसन सेन्टर बाहिर–४१४ जना
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आइसोलेसनमा–३७४ जना
संक्रमितहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी भएको छैन । जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु उपचारमा संलग्न हुनै डराउँछन् । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएपछि जनरल अस्पताल शुरु गर्न कम्तिमा ५० जना थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
महानगरले जनस्तरबाट रकम उठाएर पीसीआर मेसिन दिएपछि नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा दैनिक ५ सय हाराहारीमा नमुना परीक्षण हुन सक्छ, तर ल्याबमा ८ जना मात्र कर्मचारी छन् ।